Ungayibhala kanjani inkondlo: amathiphu ayisisekelo namasu wokuyithola | Izincwadi Zamanje
I-Encarni Arcoya | 09/09/2021 17:00 | Izinkondlo
Ukubhala izinkondlo akulula. Kukhona labo abanakho kube lula, futhi labo abakuthola kunzima kakhulu ukukwenza kuphelele. Kepha uma ufuna ukufunda uyibhala kanjani inkondlo, kukhona amathiphu athile esingakunika wona azokusiza ukuthi uqiniseke ukuthi leyo akuyona inkinga.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iziphi izihluthulelo zokubhala izinkondlo? Ungayibhala kanjani inkondlo yothando, i-nostalgia noma ifantasy? Ngemuva kwalokho unganqikazi, ngezansi sikukhombisa konke odinga ukukwazi.
1 Bhala inkondlo, yini okufanele uyazi ngaphambi kokuyenza?
1.1 Ezinye izinto okufanele uzicabangele
2 Amathiphu wokubhala inkondlo
2.1 Yazi ukuthi uzobhala ini ngenkondlo
2.2 Ukufunda kahle ulimi olunamazwi
2.3 Cacisa ngomyalezo kanye nenhloso oyifunayo
2.4 Sebenzisa izingathekiso uma uzidinga
2.5 Lawula zonke izici zenkondlo
2.6 Qaphela izimpawu zokubhala
2.7 Uma usuqedile, yisho inkondlo
2.8 Tadisha izinkondlo
Bhala inkondlo, yini okufanele uyazi ngaphambi kokuyenza?
Ngaphambi kokuzethula ukubhala inkondlo, kunemibono ethile eyisisekelo ongeke uyishiye ngaphandle, ngoba phela ingumongo wezinkondlo. Omunye waleyo miqondo uphathelene nezakhi zenkondlo. Uyazi ukuthi yakhiwe ngani?
I-Los izinkondlo zakhiwa yizakhi ezintathu kubalulekile:
Ivesi, okuwumugqa ngamunye onenkondlo.
Isitanza, empeleni okuyisethi yamavesi angafundwa ngasikhathi sinye futhi abukeke njengendima.
Imvumelwano, okuyilapho amavesi eqondana khona. Manje, ngaphakathi kwemvumelwano ungathola i-assonance, lapho onkamisa beqondana kuphela; ongwaqa, lapho onkamisa nongwaqa behlangana; nevesi lamahhala, lapho ungahambisani nanoma yiliphi ivesi (leli yikhona manje). Isibonelo kungaba ukuthi "Noma inkawu igqoka usilika / ukuhlala okuhle". Njengoba ukwazi ukubona, ukuphela kwaleli vesi kuqondana naleyo naleyo, futhi lokho kubizwa ngokuthi imvumelwano yongwaqa. Ngakolunye uhlangothi, uma sithi «Lapho kufika phakathi kwamabili / nengane yavele yakhihla isililo, / kwavuka izilo eziyikhulu / futhi isitebela saphila ... / base besondela / bazelula kuMntwana / izintamo zabo eziyikhulu , ukulangazelela / njengehlathi elizanyazanyiswayo. Uma uqaphela, le nkondlo kaGabriela Mistral (Romance of the esitebeleni saseBethlehem) isinikeza i-assonance Child, ephila futhi enyakazayo; bavuka nje basondela. Ziphela ngonkamisa, kepha hhayi ngongwaqa.
Ezinye izinto okufanele uzicabangele
Eminye yemiqondo eyisisekelo yokuthi ungabhala kanjani inkondlo yi- amamethrikhi. Lesi yisamba samaqoqo evesini futhi kubaluleke kakhulu ngoba ivesi ngalinye kumele libe namaqoqo amaningi ahlobene negama lokugcina. Uma lelo gama liyi:
I-Acute: isilayidi esisodwa ngaphezulu.
Llana: uhlala lapho onakho.
Esdrújula: uhlamvu olulodwa luyakhishwa.
Vele-ke banganikezwa amalayisense enkondlo njenge-synalepha, i-syneresis, i-hiatus, njll. lokho kungashintsha imitha yevesi noma yonke inkondlo.
Ekugcineni, kufanele futhi ucabangele isakhiwo. Okusho ukuthi, amavesi ahlukene azohambisana kanjani nemvumelwano futhi akhiwe. Kumele kuthiwe kunezinhlobo eziningana, futhi ngayinye ingazizwa ikhululeke ngokwengeziwe nganoma iyiphi enye.
Amathiphu wokubhala inkondlo
Lapho ubhekene nekhasi elingenalutho, kufanele ucacise ukuthi ungayibhala kanjani inkondlo, futhi lokho kuhamba ngokulandelayo:
Yazi ukuthi uzobhala ini ngenkondlo
Ukubhala inkondlo yothando akufani nenkondlo enenzondo. Futhi akufani ukubhala inkondlo eyiqiniso kunenkondlo yamaphupho, noma eyodwa enengqikithi ethile. Ngaphambi kokuzethula, kufanele wazi ukuthi ufuna ukubhala ngani, ngoba ukubeka imisho ethile ehambisana nemvumelwano ngaphandle kokunye ukwenziwa kwenziwa yinoma ngubani, kepha lowo mvumelwano utshele okuthile sekuvele kwaba nzima kakhulu.
Ukufunda kahle ulimi olunamazwi
Izinkondlo akuyona inoveli lapho unganweba khona okufunayo, futhi akuyona indaba emfushane lapho uxoxa khona indaba enenani elilinganiselwe lamagama. Enkondlweni kufanele wenze amagama ngokwawo abe mahle, hhayi kuphela ngenxa yamagama, kepha futhi nangenxa yesigqi, umsindo ...
Cacisa ngomyalezo kanye nenhloso oyifunayo
Kubalulekile ukuthi, ngaphezu kokwazi okufanele ubhale ngakho, futhi ugcine engqondweni ufuna ukudlulisa ini, yini inhloso yokubhala leyo nkondlo, noma yini ofuna umfundi ayizwe lapho ekufundela.
Sebenzisa izingathekiso uma uzidinga
Izingathekiso ziyi- isici sesici senkondlo, futhi bakhonza ukuhlobisa ulimi. Manje, hamba ukusuka kulokho osekuvele kwaziwa nokuthi wonke umuntu wakha wakha okwakho. Kuhle ukuzisekela kubo, kepha "amapharele amazolo" noma "ukuvimbela izinkanuko" sekuvele kusetshenziswe kakhulu, ngakho-ke ngeke kujabulise izethameli zakho.
Lawula zonke izici zenkondlo
Sikhuluma ngokukhethekile ngemvumelwano, imitha, inani lamavesi, isakhiwo ... Ngaphambi kokuba wehle, thola ukuthi ufuna inkondlo ibe kanjani ukuze unamathele kuyo. Ngakho-ke, ungagcizelela ngokwengeziwe ingxenye ethile, noma utshele okufunayo enkondlweni sengathi inesiqalo, maphakathi nesiphetho.
Qaphela izimpawu zokubhala
Lokho okubhalayo inkondlo ayisho ukuthi izimpawu zokubhala akufanele zihlonishwe. Noma kungahle kube nokuguquguquka okuningi, iqiniso ukuthi nawe kufanele ukusebenzise, ​​ikakhulukazi ukunikeza ikhefu phakathi kwamavesi nezitanza.
Ngaphandle kwalokho ungathola ukuthi umyalezo wakho mude kangangokuba umfundi akakwazi nokukhumbula ukuthi waqala kanjani, noma athi ukuma kancane aphefumule bese esika yonke incazelo yenkondlo.
Uma usuqedile, yisho inkondlo
Kuyindlela elula yokwenza ubone ukuthi inkondlo "inempilo ngempela yini." Yini leyo? Imayelana nokwazi ukuthi inomsindo, uma inesigqi, iphimbo, inshokutsi nokuthi ingabe ikwenza uvuse okuthile. Uma uma uyifunda kubonakala kunganakho ukuphila noma ukubamba, ungadikibali bese uzama futhi.
Into ebalulekile nalokho okufanele uzame ukukutshela kuleyo migqa embalwa konke okufunayo, nokuthi igama ngalinye lithwala umthwalo wokuzwa yilokho okwenza lonke "libe yinkondlo".
Iseluleko sokugcina esikunikeza sona ukuthi funda konke okuphathelene nohlobo lwemibhalo lwezinkondlo. Ukuphela kwendlela yokwenza ngcono ezinkondlweni zakho nokuba yisifundiswa sendaba ngokufunda ngayo. Ngakho-ke, akwanele nje ukufunda izinkondlo futhi ubone ukuthi abanye ababhali bonyaka odlule futhi manje bazenza kanjani izinkondlo, kepha udinga ukwazi ukuthi yiziphi izisekelo, umlando nokuguqulwa okutholakale ekutholeni indlela yakho.
Ngabe usalinga manje ukubhala inkondlo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izinkondlo » Ungayibhala kanjani inkondlo
UFrancisco de Quevedo. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Amasonethi